Ikhabhinethi yeNative America 7-iRocky Point Cabins - I-Airbnb
Ikhabhinethi yeNative America 7-iRocky Point Cabins
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDusty
Yonwabela i-rustic ukubaleka kwindlwana yamaNative American! Ikhabhinethi ifakwe ngokupheleleyo ubushushu obuphakathi kunye nomoya, ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo elinefriji, isitovu, imicrowave, imbiza yekofu, izitya, iipani, izitya, kunye neelinen zasekhitshini. Le ndlwana ikwanedekhi, i-charcoal grill, indawo yomlilo, kunye netafile yepikiniki. Ikhabhinethi yeNative American (#7) yenye yeekhabhini ezili-10 ezibekwe kwipropati yeeKhabhinethi zaseRocky.
Ipropathi yaseRocky Point Cabins ibekwe kwihlathi eliqinileyo laseCross Timbers elibonelela ngeekhabhini ezirentisayo ezili-10 unyaka wonke. Ezi khabhinethi ziqala kwigumbi lokulala elinye ukuya kumabini abucala, zinokulala lula ukuya kutsho kubantu abathandathu. Indlu nganye ihonjisiwe kwaye iyilwe ngobuntu bayo kunye nomlingiswa wayo.
Iikhabhinethi zaseRocky Point zimi kwimizuzu emibini ukusuka eLake Arbuckle ukuqubha kunye nerempu yokuqaliswa kwesikhephe. Iikhabhini zibekwe ngokufanelekileyo kufutshane neZiko leNkcubeko leChickasaw, iNdawo yoLonwabo yeSizwe yeChickasaw (iPaki yeSizwe), iArtesian Hotel & Casino, kunye neTurner Falls. IWalmart ikwimizuzu emine ukusuka kwiikhabhinethi.
Umbuki zindwendwe ngu- Dusty
Iindwendwe zamkelekile ukufikelela kuthi ngazo naziphi na iinkxalabo okanye utshintsho.